Jasiiradda maqaarka 'Leopard' waa dhagax silica ah oo u muuqda inuu yahay maqaar baras leh - fiidyow
Tags Jasper, Leopard, Maqaarka 'Leopard'
Iibso dukaanka maqaarka ee leopard gorgorka dabiiciga ah
Leopard jasper maqaarku wuxuu muujiyaa iskudhafyo qaabab ah taas oo ka dhaceysa waxa u muuqda maqaarka shabeellaha ah, qeybta go'ay. Kala jaheynta xarun waxay soo saartaa muuqaal orbicular kala duwan.
In kasta oo jaspers sawirkan laga heli karo adduunka oo dhan, midabyo gaar ah ama qaab ayaa gaar u ah gobolka juquraafiyeedka ay ka yimaadeen. Isha aasaasiga ah ee dhagaxaani waa Indonesia, gaar ahaan degmada Purbalingga.
Dhagax dhagxan leh
Jasper waa dhagaxii opaque ee inta badan midab kasta oo ka soo baxa macdanta waxyaalaha asalka ah ama dambaska. Qaabab dhismeedka ayaa soo baxa inta lagu gudajiro nidaamka isku-darka sameynta sameynta socodka iyo qaababka kaydinta asalka dabiiciga ah ee silica ama dambas foolkaane. Hawada wareegga dhiigga guud ahaan waxaa loo maleynayaa in looga baahan yahay samaynta Jasiiradda.
Jasper waxaa lagu hagaajin karaa kala-duwanaanta macdanta iyadoo ay weheliso joojinta muuqaal ahaan koritaanka daaqsinka. Alaabada asalka ah ayaa badanaa la jebiyaa ama la qalloociyaa, ka dib dhigista, qaabab kala duwan, oo markii dambe ay ka buuxaan macdano kale oo midab leh. Cimilo-qabashada, iyada oo wakhtiga la joogo, ayaa abuuri doonta dillaacyo waaweyn oo midabeysan.
Kala soocida iyo magac bixinta noocyo kala jaad ah ayaa caqabad ku ah. Shuruudaha lagu soo rogay agabyo si fiican loo qeexay waxaa ka mid ah deegaanka juquraafiyeedka halka laga helo, mararka qaarna waa xadidan tahay sida xeebta, wabiyada iyo xitaa buuraha shaqsiyeed. Kuwo badan ayaa jecel, sida dab kaynta ama qaansoroobaad, halka kuwo kalena ay sharraxaad ka bixinayaan, sida dayrta ama jardiinada. Qaar yar ayaa loo qoondeeyay meesha ay ka yimaadeen sida Masar oo brown ama casaan Afrikaan ah.
Jasper waa qaybta ugu weyn ee qaybaha hodanka ku ah silica-ka ee samaynta birta xirma taas oo tilmaamaysa mid hooseysa, laakiin hada ah, qaddar oksijiin ah oo ku milma biyaha sida inta lagu gudajiro munaasabadda qodista weyn ama barafka. Xargaha gaduudan, sida caadiga ah karti u leh lakabyada hematite ee ku xeeran, waxay ka samaysan yihiin calaamadaha casaanka microcrystalline, oo sidoo kale loo yaqaan Jasiiradda.
Tags Jasper, cas